Aprimo | စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဗီဒီယို
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 27, 2011 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
Marketing Technology Newsletter နှင့်အတူအသစ်သောအစပျိုးမှုကိုစတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာရေဒီယိုပြ... ငါတို့သည်လည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာဗီဒီယိုစီးရီးကိုစတင်ပါ!
Hosted နှင့်ထုတ်လုပ်သည် 12 ကြယ်မီဒီယာထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏နောက်ကွယ်ရှိလူများနှင့်ထိပ်တန်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများအားဤစီးရီးကသင့်အားမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီးအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါတယ် Aprimoတစ် ဦး နှင့်အတူတစ် ဦး စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကုမ္ပဏီ စျေးကွက်သမားများအတွက်အလွန်အမင်းခေတ်မီသော toolset.
ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာဗီဒီယိုတွေအတွက်တန်းစီထားတဲ့ကုမ္ပဏီအတော်များများရှိတယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီသည် Indiana ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းတွင်မရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့မှသင်ရိုက်ကူးမည့်ဗီဒီယိုများနှင့် 12 Stars Media သည်ဗွီဒီယိုကိုရောနှောပါလိမ့်မည်။ စောင့်ဆိုင်းစာရင်းသည်ရှည်လျားပြီး၊ ဗွီဒီယိုများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များရှိကြောင်းသတိရပါ။
သင်နောက်ဖြစ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ မှ Rocky နှင့် Zach တို့အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် 12 ကြယ်မီဒီယာ ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်သည်။